उत्तम एन्ड्रोइड फोनहरू: परीक्षण, सुरुवात, अफवाहहरू ... | Androidsis (पृष्ठ) 19)
ऑनर मैजिक २: ऑनरको उच्च-अन्त नवीकरण गरिएको छ
ऑनर मैजिक २: नयाँ उच्च-अन्तका सम्मान घोषणा गरियो। नयाँ चिनियाँ ब्रान्ड फोनको घोषणाको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
शाओमी मी मिक्स of को पहिलो छवि यहाँ छ
शाओमी मी मिक्स the को पहिलो आधिकारिक छवि देखा पर्‍यो। चिनियाँ ब्रान्डको शरद inतुमा आइपुग्ने नयाँ उच्च-अन्तको डिजाईनको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
ग्यालक्सी नोट of को नयाँ घोषणा जहाँ यसले यसको मुख्य उपन्यासहरूको प्रशंसा गर्दछ
पछिल्लो अगस्त २ Since देखि, ती सबै प्रयोगकर्ताहरू जसले नयाँ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट enjoy लाई मजा लिन चाहान्छन् अब गर्न सक्छन् ...
जेडटीईले भर्खरै एक्सन Pro प्रो घोषणा गरेको छ, यो नयाँ फ्ल्यागशिप। चीनियाँ फर्मबाट नयाँ उच्च-टर्मिनलको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
ब्ल्याकबेरी कुञ्जी २ ले टर्मिनल हो जुन एक धेरै सटीक प्रयोगकर्ता लक्ष्यको साथ भौतिक कुञ्जीपाटी र स्पेस कुञ्जीमा अवस्थित फिंगरप्रिन्ट सेन्सर संयोजन गरेर हुन्छ।
स्पेनमा ऑनर प्लेको मूल्य र उपलब्धता
Honor स्पेन को लागी Honor Play को मूल्य र उपलब्धता को घोषणा गरीएको थियो। यस भर्खरको खुलासा गरिएको समाचारको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
Pocophone F1 भारत मा पाँच मिनेट मा बिक्छ
पोकोफोन एफ १ भारतमा मात्र minutes मिनेटमा बेचियो। भारतमा चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्त बिक्री बारे अधिक जानकारी पाउनुहोस्।
सोनी Xperia XZ3: सोनीको नयाँ प्रमुख
सोनी Xperia XZ3: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। आईएफए २०१ at मा प्रस्तुत सोनी उच्च-अन्तको बारेमा सबै फेला पार्नुहोस्।
HTC U12 Life: ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायरा
HTC U12 Life: निर्दिष्टीकरणहरू, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। ताइवानी निर्माताबाट नयाँ मध्य-दायरा बारे सबै पत्ता लगाउनुहोस्।
वनप्लस and र T टी तिनीहरूको नयाँ बेटामा सेल्फीको लागि पोर्ट्रेट मोड पाउँछन्
ऑक्सीजनओसको नयाँ बेटा वनप्लस and र T टीमा आउँदछ। नयाँ बेटाको बारेमा थप खोजी फेला पार्नुहोस् जुन समाचारको साथ उच्च-अन्तमा पुग्छ।
सोनी Xperia XZ3 को सूचना र र var्ग भेरियन्टहरू यसको सुरूवात हुनु अघि नै चुहावट हुन्छ
सोनीले आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले Xperia XZ3 चाँडै चुहावटमा देखा पर्दछ, विनिर्देशहरू र रंगहरू जान्दछन्।
Vivo X23 तीन भिन्न र colorsहरूमा सुरूवात हुनेछ
Vivo X23 ले तीन फरक र stores्गमा स्टोरहरूमा हिट गर्नेछ। फोन सुरु हुने रंगहरूको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
Vivo V11 Pro फर्मको वेबसाइटमा यसको सुरु हुनुभन्दा अघि देखा पर्‍यो
Vivo V11 Pro भर्खरै कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा यसको प्रक्षेपण अघि प्रकट भएको छ जुन सेप्टेम्बर6को लागि निर्धारित गरिएको छ।
Huawei विश्वव्यापी स्मार्टफोनको दोस्रो निर्माताको रूपमा पुष्टि छ
अगस्टको सुरूमा दुबै एप्पल र हुवेले दोस्रो क्वाटरमा आधिकारिक ह्यान्डसेट बिक्री आंकडा प्रस्तुत गरे ...
OUKITEL K8 समीक्षा
हामीले OUKITEL K8, कम लागतको स्मार्टफोन screen इन्चको स्क्रीन र screen १ than० भन्दा कमको लागि धेरै शीर्ष सुविधाहरू भएको डुअल क्यामेराको परीक्षण गर्‍यौं। लायक?
AGM X3 आधिकारिक हो: स्नापड्रैगन 845 withXNUMX को साथ एक असहमत फोन
AGM X3 स्नैपड्रैगन 845 and। र धेरै प्रमाणपत्रहरूको साथ आधिकारिक हो जुन यसलाई सबै चीजको प्रमाण दिन्छ। यस "अविनाशी" फोनको बारेमा बढि जान्नुहोस्!
OUKITEL C12 प्रो: निशानको साथ नयाँ प्रविष्टि दायरा
OUKITEL C12 प्रो: निशान र डबल क्यामेराको साथ प्रविष्टि दायरा। नयाँ OUKITEL फोनको बारेमा सबै फेला पार्नुहोस् जुन सेप्टेम्बरमा आउनेछ।
ARCHOS पहुँच 57: 4G को साथ एन्ड्रोइड गो फोन
ARCHOS पहुँच: 57: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र रिलिज। यस फोनको बारेमा बढि जान्नुहोस् जुन एन्ड्रोइड गोको साथ बजारमा आउँदछ।
HTC U12 Life स्नेपड्रैगन 636 XNUMX SoC संग Geekbench मा लीक
HTC U12 Life एक SD636 को साथ Geekbench मार्फत जान्छ। यस फर्मको अर्को मध्य-दायराको खुलासा गरिएको डाटाको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
Honor 8X अधिकतमको पहिलो आधिकारिक छवि फिल्टर गरियो
Honor 8X अधिकतम को पहिलो आधिकारिक छवि यहाँ छ। नयाँ चिनियाँ ब्रान्ड फोनको डिजाइनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
सोनी आधिकारिक रूपमा धेरै फोन IFA २०१ present मा प्रस्तुत गर्दछ। जापानी कम्पनीको IMA मा हुने घोषणाको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
न्युबिया जेड १ यो सेप्टेम्बर 18 मा प्रस्तुत गरिनेछ, सायद जर्मनीको बर्लिनको आइएफएमा। हामी तपाईंलाई खबर विस्तार!
ग्यालक्सी नोट9आईफिक्सिटको हातबाट भइसकेको छ र नोट राम्रो छैन
सामान्य रूपमा, प्रत्येक चोटि बजारमा कुनै नयाँ उपकरण हिट हुँदा, आईफिक्सिटका केटाहरूले इन्टि get पाउँदछन् यसमा gutting शुरू हुन्छ र सामसु'sको ग्यालक्सी नोट already IFixit को हातमा भइसकेको छ, र एक अंक प्राप्त गरेको छ, अघिल्लो भन्दा समान,9१० बाहिर।
ग्यालक्सी टैब एस officially आधिकारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरिएको छ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ट्याब एस now अब स्पेनमा उपलब्ध छ। कोरियाली ब्रान्डको नयाँ उच्च एन्ड ट्याब्लेट आधिकारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरिएको छ।
LG G7 One: LG को पहिलो Android One फोन
LG G7 One: अपरेटिंग प्रणालीको रूपमा पहिलो एन्ड्रोइड वनको साथ एलजी मोबाइल। कोरियाली ब्रान्डबाट यो नयाँ फोनको बारेमा अधिक खोज्नुहोस्।
Pocophone F1 सुरूवात हुने देशहरूको पूर्ण सूची अनावरण गरियो
यो पोखोफोन एफ १ कुन देशहरूमा सुरू हुन्छ भनेर थाहा भइसकेको छ। देशहरूका बारे बढि पत्ता लगाउनुहोस् जहाँ तपाईं उच्च-अन्त खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
अब तपाईं स्पेनमा ओप्पो खोज X आरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ
ओप्पो फाइन्ड एक्स पहिले नै स्पेनमा तीन अनलाइन स्टोरहरूमा आरक्षणको रूपमा उपलब्ध छ: मिडिया मार्कट, एफएनएसी र एल कर्टे ईन्ग्लस।
हुवावे मेट २० लाइट अब बिक्रीमा छ: टेक्निकल स्पेसिफिकेसन र मूल्य
हुवावे मेट २० लाइट भर्खरै पोलिश मूलको अनलाइन स्टोरमा बिक्रीको लागि राखिएको छ। यसको विशिष्टता र मूल्य जान्नुहोस्!
सबै तीन ग्यालेक्सी S10 एक अन-स्क्रीन फिंगरप्रिन्ट सेंसर हुनेछ। सामसु'sको नयाँ उच्च-अन्तको साधारण सुविधाको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस्।
पोकोफोन एफ १ अगस्त Spain० मा स्पेनमा सुरू हुन्छ। स्पेनमा यस उच्च-अन्तको सुरूवात मिति आधिकारिक रूपमा पत्ता लगाउनुहोस्।
किरीन 980 .० अर्को त्रैमासिकमा शिपिंग सुरु हुनेछ
Huawei पछिल्लो क्वार्टर मा किरिन 980 XNUMX को ढुवानी शुरू हुनेछ। यस Huawei प्रक्रियाको बजारमा आगमनको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
पोकोफोन एफ 1 आज फ्रान्स, इन्डोनेशिया र ह Hongक Kongमा सुरू गर्दछ
Pocophone F1 आज देखि फ्रान्स मा किन्न सकिन्छ। नयाँ चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्त प्रक्षेपणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
AGM X3 TENAA मार्फत जान्छ: डिजाईन र विशिष्टताहरू
AGM X3 भर्खरै TENAA मा यसको छविहरू र टेक्निकल विशेषताहरूको साथ लीक भयो। यो अर्को रबड स्मार्टफोनको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
LG V40 को डिजाइन भिडियोमा लीक भयो
भिडियोमा LG V40 को डिजाइन लीक भयो। कोरियाली फर्मको नयाँ उच्च-अन्तको डिजाईनको बारेमा अधिक फेला पार्नुहोस् जुन शरद inतुमा आउनेछ।
Honor 8X अधिकतम को पहिलो विशिष्टता फ़िल्टर गरियो
Honor 8X अधिकतम: पहिलो विशिष्टता चुहायो सेप्टेम्बरमा प्रस्तुत गरिने चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायराको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
भोडाफोन स्मार्ट एन Lite लाइट: एक धेरै सस्तो मूल्यमा एन्ड्रोइड .9.१ गो मोबाइल
भोडाफोनले भर्खरै स्पेनमा स्मार्ट एन Lite लाइट सुरू गरेको छ। एन्ड्रोइड .9.१ गोको साथ यो नयाँ फोनको बारेमा सबै विवरणहरू फेला पार्नुहोस्!
Magisk अब Huawei फोनमा काम गर्ने छैन
Magisk Huawei फोनहरूमा काम गर्न रोक्दछ। चिनियाँ ब्रान्डको अनुप्रयोग ब्लक गर्ने निर्णयको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
यसको सुरूवात भएको तीन दिन पछि, Realme २ का प्राविधिक विवरण लीक भएको छ
अर्को Realme टर्मिनल, रियलमी २ पूर्ण रूपमा चुहावट भयो। यसको सबै सुविधाहरू र प्राविधिक विवरणहरू जान्नुहोस्!
Vivo V11 Pro सेप्टेम्बर on मा सुरूवात हुनेछ
Vivo V11 Pro आधिकारिक रूपमा सेप्टेम्बर on मा सुरूवात हुनेछ। चाँडै आउँदै गरेको चिनियाँ ब्रान्डबाट नयाँ फोनको बारे अधिक जान्नुहोस्।
Geekbench ZTE Axon9Pro का धेरै सुविधाहरू पुष्टि गर्दछ
ZTE Axon9Pro का केहि प्राविधिक विवरणहरू, जस्तै प्रोसेसर र र्याम, भर्खर Geekbench द्वारा प्रकट गरिएको छ। ती सबैलाई चिन्नुहोस्!
सोनी Xperia XZ3 को पहिलो आधिकारिक छवि फिल्टर छ
सोनी Xperia XZ3 को एक कथित प्रोमोशनल छवि हामी तक पुगेको छ, धेरै अफवाहहरु पुष्टि र अरूलाई इन्कार गर्दै
ओप्पो आफ्नो पहिलो G जी फोनमा काम गर्दैछ
ओप्पो आफ्नो पहिलो G जी स्मार्टफोनमा काम गरिरहेको छ। फर्मको यस प्रोजेक्टको बारेमा सबै विवरणहरू जान्नुहोस्।
Cameras क्यामेरा, न अधिक न त कम, ती ती हुन् जुन LG V5 को पहिलो छविमा देखा पर्दछ
LG V40 नोभेम्बरमा प्रस्तुत गरिने छ र अब पहिलो तस्बिर आउँदछ जुन क्यामेराको संख्यामा प्रकाश दिन्छ: केवल।।
मेरो सहयोगी एडरले तपाईंलाई सम्झाइएको छ, आज सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट officially आधिकारिक रूपमा बिक्रीमा गइरहेको छ, टर्मिनल जसमा सामसु Samsungले चाहँदैन कि स्यामसंगले आफ्नो वेबसाइटमा एक भिडियो पोस्ट गरेको छ जसमा हामी निर्माण प्रक्रियाको अंश देख्न सक्छौं स्यामसंग ग्यालेक्सी नोट 9
धेरै ती प्रयोगकर्ताहरू हुन् जसले अस्थायी रूपमा उनीहरूको टर्मिनलहरूको पृष्ठभूमि छवि परिवर्तन गर्दछ, या त थकानको कारणले, वा केवल उनीहरूले यसलाई टच दिन चाहन्छन्। यदि तपाईंलाई स्याओमी पोकोफोनबाट आएको वालपेपरहरू मनपर्दछ भने, यस लेखमा हामी तपाईंलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा देखाउँदछौं। तिनीहरूलाई तपाइँको स्मार्टफोन निजीकृत गर्न को लागी।
ग्यालक्सी नोट9आधिकारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरिएको छ। स्पेनमा सामसु'sको उच्च-अन्तको दायराको प्रक्षेपणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
HTC U12 Plus ले स्वायत्तता र सामान्य प्रदर्शन सेक्सनमा धेरै सुधारको साथ नयाँ अपडेट प्राप्त गर्दछ। थप, यो CryptoKitties संग आउँछ!
तपाईं ग्यालक्सी नोट on मा Bixby बटन अक्षम गर्न सक्नुहुन्न यस विवादास्पद सामसु decision निर्णयको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
ग्यालक्सी जे २ कोर: सामसु'sको पहिलो एन्ड्रोइड गो फोन
ग्यालक्सी J2 कोर: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। अपरेटिंग सिस्टमको रूपमा एन्ड्रोइड गोको साथ पहिलो सामसु phone फोनको बारेमा सबै फेला पार्नुहोस्।
विको सन्नी and र सनी Mini मिनी: एन्ड्रोइड गोको साथ कम-अन्त
विको सन्नी and र सनी Mini मिनी: विशिष्टता, मूल्य र सुरुवात। अपरेटिंग सिस्टमको रूपमा एन्ड्रोइड गोको साथ यो कम-अन्तको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
OPPO R17 Pro: ब्रान्डको नयाँ प्रमुख
विपक्ष R17 प्रो: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। आज प्रस्तुत गरिएको चिनियाँ ब्रान्डबाट नयाँ फोनको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
Doogee S70 पहिले नै आधिकारिक छ र यो धेरै चाखलाग्दो सुविधाहरू र विशिष्टताको साथ आउँदछ। विश्वको पहिलो रबग गेमिंग मोबाईलको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
गुगलको पिक्सेल X एक्सएलमा बढि विवरणहरू: गुगल सहायकका साथ पुनः डिजाइन गरिएको क्यामेरा अनुप्रयोग र वायरलेस हेडफोन
गुगल पिक्सेल X एक्सएल आउँदैछ र अब हामी यसको हेडफोन र पुनः डिजाइन गरिएको क्यामेरा अनुप्रयोगको बारेमा बढि जानकारी जान्दछौं।
LG V40 अक्टूबर मा दक्षिण कोरिया मा शुरू हुनेछ। कोरियाली फर्मको नयाँ उच्च-अन्तको बारेमा अधिक जानकारी पाउनुहोस् जुन शरद inतुमा आउनेछ।
शाओमीले दोस्रो क्वाटरमा million२ मिलियन स्मार्टफोन बेचेको छ। दोस्रो क्वाटरमा चिनियाँ ब्रान्ड फोनहरूको बिक्रीको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
ZTE Axon9Pro को अन्तिम डिजाइन पहिले नै प्रकट भइसकेको छ। डिजाईन डिस्कवर गर्नुहोस् जुनसँग चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ फोन हुन्छ जुन यस महिना आउँदछ।
Vivo X23 को पहिलो आधिकारिक घोषणा प्रकट भयो। नयाँ चिनियाँ ब्रान्ड फोनको पहिलो घोषणाको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
LG V40: यसको पहिलो फिल्टर छविहरूमा ट्रिपल रियर क्यामेरा र निशान। नयाँ उच्च-एंड एलजीको डिजाईन पत्ता लगाउनुहोस् जुन चाँडै आउँदैछ।
गुगल पिक्सेल X एक्सएलको साथ लिइएको पहिलो फोटोहरू आइपुग्छन्
पिक्सेल X एक्सएलको साथमा लिइएको फोटोहरूको ठूलो ढेर नयाँ Google फोनको खजानाको गुणस्तर प्रदर्शन गर्न पुग्यो।
पोको F1 यहाँ छ, शाओमीको नयाँ उच्च-अन्तको ब्राण्ड एकदम कम लागतमा
पोको एफ १ एक मोबाइल हो जुन यसको 1 "" एमोलेड स्क्रिन, स्न्यापड्रैगन 5,99, / / ​​GB जीबी र्याम र ,845,००० एमएएच ब्याट्रीको विशेषता हो।
नोकिया X7 को पहिलो छवि फिल्टर
नोकिया X7 को पहिलो छवि लीक भएको छ। फर्मबाट नयाँ फोनको बारेमा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् जसको पहिलो छवि पहिले नै चुहावट भयो।
सामसुले ग्यालक्सी व्यूको नयाँ जेनरेशनमा काम गरिरहेको छ
तीन बर्ष अघि कोरियाली कम्पनीले विशाल १ 18,4..18 इन्च ट्याब्लेट लन्च गर्यो जुन ट्याब्लेट केवल घरेलू बजारमा मात्र नभई कोरियाबाट आउने अफवाहका अनुसार सामसु theले ग्यालेक्सी व्युको दोस्रो पुस्तामा काम गर्न सक्दछ, १ be- ईन्च ट्याब्लेट
सामसुले युरोपका लागि पाँच नयाँ स्मार्टफोनहरूमा काम गर्दछ
सामसु युरोपका लागि पाँच फोन विकास गर्दैछ। युरोपमा फर्मको आगामी प्रक्षेपणको बारेमा अधिक जानकारी पाउनुहोस्।
LG ले यसको नयाँ हेडफोनमा गुगल सहायकका लागि बटन प्रस्तुत गर्दछ। LG बाट यी ताररहित हेडफोनहरूको बारेमा थप खोजी गर्नुहोस्।
Meizu 16X AnTuTu हुँदै जान्छ र यसको मुख्य गुणहरू प्रकट गर्दछ। कम्पनीले हाम्रो लागि स्टोरमा के छ पत्ता लगाउनुहोस्।
नोकिया .6.1.१ प्लस र नोकिया .5.1.१ प्लस: ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायरा
नोकिया .6.1.१ प्लस र .5.1.१ प्लस: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र सुरुवात। नोकियाबाट दुई नयाँ मध्य-दायरा फोनहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
स्पेनिश फर्म, BQ, भर्खर A क्वायरिस सी आधिकारिक बनाएको छ। यो नयाँ कम-दायरा फोन को सबै तकनीकी विवरणहरु को बारे मा जान्नुहोस्।
नोट reserved सुरक्षित राखेका धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरूले 9१२ जीबी संस्करणको लागि रोजेका छन्
अगस्त9मा, कोरियाली कम्पनीले आधिकारिक रूपमा ग्यालक्सी नोट presented प्रस्तुत गर्‍यो, टर्मिनल जसले हामीलाई रमाइलो भिन्नता प्रदान गर्दछ यदि हामी यसको तुलना गर्छौं। दक्षिण कोरियाबाट आइपुगेका तथ्या to्कहरूको अनुसार, 9१२ जीबी मोडेल सबैभन्दा आरक्षित भइरहेको छ, १२ 512 जीबी भण्डारण भन्दा बढी मोडेल